miverina hifanandrinan’ny ekipam-pirenena Senegaley, “Les Lions de la Teranga” sy ny Barea Malagasy eo amin’ny fifanintsanam-bondrona A amin’ny CAN. Manana ny heviny ny mpitia kitra Malagasy :
“ Ny baolina boribory ka tsy maintsy misy ny resy sy handresy amin’ity lalao ity na koa hanao ady sahala ny roa tonta. Amin’ny maha-Malagasy ny tena dia tsy maintsy mirona kokoa any amin’ny Barea ny fo aman-tsaina na dia very ara-batana aza ny mpilalaontsika. Mahita 2-1 matin’ny Barea aho.
Raha amin’ny fandraisana anjaran’ny Barea amin’ny CAN 2019 indray dia mahita azy ho tafavoakany fifaninanam-bondrona misy azy aho”.
“Raha miady mafy ny ekipantsika dia mety hahita 1-0 nefa any an-tanin’olona no milalao ka mety hahita 2-1 ihany ry zareo. Efa mipetrapetraka tsara ankehitriny ny traikefa hananan’ny Barea amin’ity fifaninana ity ka mety hahita ady sahala 1-1 ihany izy.Any amin’ny fandraisana anjara amin’ny CAN Egypte 2019 dia mahita ny Barea hiatrika ny lalao 1/4-dalana ny tenako”.